Hotels For Sale in Australia
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Iimpahla zentengiso Hotels
I-1-10 yoluhlu lwe-13
IBill Newton Vc yeeGadi- eDubbo-Nsw
Izitiya zeBill Newton VC- Dubbo - NSWBill Newton VC Gardens - Indawo yaseDubbo entsha yeNdawo yokuGcina abaDala sele ivulekile! Le ndawo intsha yokuhlala iyindawo enamakhaya abahlali abangama-60 abafuna ukhathalelo lwendawo yokuhlala. Indawo ekufutshane nomzi wase-Horizons Village, indawo yethu yokuhlala intofontofo ibandakanya ...
umbono Hotels ishicilelwe iintsuku 2 eyadlulayo
Unonophelo lwendawo yokuhlala e-Easton Park - Glenfield - Nsw
Ukhathalelo lweNdawo yokuhlala e-Easton Park - Glenfield- NSWWhiddon Easton Park yindawo yokuhlala abantu abadala abanonopheleyo eSydney kumazantsi entshona. Ifumaneka eGlenfield, e-Easton Park ibonelela ngeenkonzo zokufumana ukhathalelo lwabadala.
umbono Hotels ishicilelwe iintsuku 3 eyadlulayo
IArthur Blackburn Vc yeeGadi - ePort Macquarie - Nsw
IArthur Blackburn VC Iigadi - ePort Macquarie - NSWArthur Blackburn VC Gardens yindawo yokuGcina indawo yokuhlala esandula ukuvulwa ePort Macquarie.Le ndawo intsha entle yokuhlala iya kuba yindawo yokuhlala yabakhweli abangama-80 abafuna ukhathalelo lwendawo yokuhlala (ukhathalelo olusezantsi kunye nononophelo oluphezulu). Ibanjelwe ePozieres Vill ...
umbono Hotels ishicilelwe iintsuku 4 eyadlulayo
Amachibi eCustomers Stafford aLupheleyo eKhathalweni Indawo yokuhlala - eChermside West - Qld
Amabala okuLondolozwa kweTricord Stafford ahlala abantu abakhulileyo kwindawo yokuhlala - eChermside West - QLDWELCOME TO STAFFORD LAKESTradfort Comforte baphucuka ngononophelo lwabadala kwikhaya lethu leStafford Lakes elihlala lanamhlanje, lixhonywa ziimpawu ezinokulindelwa kuphela kukuqonda. Unika uluhlu olubanzi lokuthuthuzela ...
Ihostele yoMhlalaphantsi waseLewisham-Lewisham - Nsw
Ihostele yokuthatha umhlala-phantsi yase-Lewisham-Lewisham - NSWIhostele inobuhlobo kwaye iyaziva lisekhaya kugxilwe kumgangatho wobomi wabo bonke abahlali. Isakhiwo sanamhlanje, esinemigangatho emininzi (esinokuphakamisa) sinika amagumbi okulala anomdla, amanye aneebhalkhon. Iintendelezo ezigciniweyo zibonelela ngendawo yokuphumla yokuphumla yokunandipha kunye v ...
umbono Hotels ishicilelwe iintsuku 5 eyadlulayo
I-Irt i-Clyde Retirement Village - iBatemans Bay - Nsw
I-IRT i-Clyde Retirement Village - eBatemans Bay - NSWLobekekileyo ngaselunxwemeni lwaseBateman's Bay, uyonwabele kwaye ikonwabele le ndawo yokuhlala abantu basehotele.Join uluntu lwethu olunengqondo engaphezulu kweminyaka engama-55. amagumbi okulala amathathu ne amathathu anabucala ...
Ilali entle eKhangelwe emva kweZiko loLuntu lwase-Berry-Berry-Nsw
Ilali entle kwilizwana lase-Berry - I-Berry - NSWRFBI I-Berry Masonic ilali ikwindawo entle ye-Berry, idolophu entle entle eneeyure ezimbini nje kuphela ukuya eSydney kwaye ikwi-17km kuphela ukusuka kwidolophu yengingqi ye-Nowra. Ilali ikwindawo yokuhamba ...
umbono Hotels ishicilelwe kwiiveki 1 ezidlulileyo
Ubomi baseziFama kuluntu oluKhuselekileyo lwabaNtu-iNtshona Wyalong-Nsw
Ubomi bokulima kwindawo enobuntu ekhuselekileyo- West Wyalong-NSWYikhaya lakho elitsha e-RFBI West Wyalong Masonic Village ikufuphi neziko ledolophu enembali yaseNtshona Wyalong kwingingqi ye-Riverina entle. Inelifa lemigodi yegolide ecocekileyo nelinomdla kwaye inomtsalane, izakhiwo zigcinwe kakuhle ..
umbono Hotels ishicilelwe kwiiveki 4 ezidlulileyo
umbono Hotels ishicilelwe ngenyanga 1 edlule
A ihotele sisiseko esibonelela ngendawo yokuhlala kwindawo yexeshana elifutshane. Izixhobo ezibonelelweyo zinokuqala ukusuka kumatrasi osemgangathweni osemgangathweni kwigumbi elincinci ukuya kumagumbi amakhulu aneebhedi ezinkulu, ezikumgangatho ophezulu, onxiba, efrijini kunye nezinye izinto zasekhitshini, izitulo eziphakamileyo, umabonakude wefulethi kunye negumbi lokuhlambela elinemigangatho. Iihotele ezincinci, ezinamaxabiso aphantsi zinokubonelela kuphela ngeenkonzo ezisisiseko zondwendwe kunye namancedo. Ihotele ezinkulu, ezinamaxabiso aphezulu zinokubonelela ngendawo eyongezelelweyo yeendwendwe ezifana nedama lokuqubha, iziko leshishini (elineekhompyuter, abashicileli kunye nezinye izixhobo zeofisi), ukhathalelo lwabantwana, inkomfa kunye namaziko eminyhadala, tennis okanye inkundla yebhola yebhasikithi, indawo yokuzivocavoca, iresti, usuku lwe-spa kunye noluntu iinkonzo zomsebenzi. Amagumbi ehotele adla ngokuba neenombolo (okanye abizwe kwezinye iihotele ezincinci kunye nee-B & B) ukuvumela iindwendwe zichonge igumbi labo. Ezinye ihotele, iihotele eziphakamileyo zinegumbi elihonjisiweyo ngokwezifiso. Ezinye ihotele zibonelela ngokutya njengenxalenye yegumbi kunye nolungiselelo lwebhodi. E-United Kingdom, ihotele iyafuneka ngokomthetho ukuba itye ukutya kunye neziselo kuzo zonke iindwendwe kwiiyure ezithile ezichaziweyo. EJapan, iihotele zecapsule zibonelela igumbi elincinci elifanelekileyo kuphela kwindawo yokulala kunye nakwindawo yokufundela.